Global Voices teny Malagasy » Lehilahy Safiotra Vietmaniana-Amerikana Mitondra Ny Niainan’ireo Mpifindramonina Ao Etazonia Ho Anaty Tononkalo · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Avrily 2016 6:17 GMT 1	 · Mpanoratra PRI/PRX's The World Nandika avylavitra
Sokajy: Amerika Avaratra, Azia Atsinanana, Etazonia, Vietnam, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Zavakanto & Kolontsaina
Teraka tany Saigo i Ocean Vuong, poety sady mpanoratra, ary lehibe tany Hartford, Connecticut. Sary: Peter Bienkowski
Ny 13 Aprily 2016, nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org  ity lahatsoratr'i Joyce Hackel  ity ary naverina navoaka eto ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Tsaroan'ilay safiotra Vietnamiana-Amerikana poeta, Ocean Vuong, ny fiatombohan'ny niainany ny fifindrany monina, tamin'ny aliny voalohany tao Amerika niforetany tanaty efitra tery kely, tsy nisy fanaka tao Connecticut niaraka tamin'ny havany enina sy siny “old man chicken” iray.
“Nanana KFC izahay, izay mbola antsoin'ny fianakaviako foana hoe ‘old man chicken’ hatramin'izao noho ny endriky ny Col. Sanders eo amin'ireo siny,” hoy i Vuong. “Tena nangatsiaka tamin'izay, nanomboka nilatsaka ny orampanàla ary renao mitefotefoka amin'ny varavarankelin'ilay tranobe, ary ao anatin'io siny toa mahagaga io izahay no mantsaka sy misotro ity dite nentinay nanaraka anay ity, dia nanomboka nifampitantara tantara.”
Ireny tantara nozarain'ny fianakavian'i Vuong tamin'ireo ankizy tamin'izany fotoana izany ireny dia norariany ho ao anatin'ny fitambaranà tononkalo vaovaony, “Night Sky with Exit Wounds” (Lanitry ny Alina sy Ratram-Pilefàna). Tononkalo mijery ny omaly sy ny ampitson'ny fiainana ao Vietnam ary Amerika, tsy ny fahatsiarovana ny lasa loatra fa fandraketana ny fiantraika faran'ny ady izay mbola manakoako any amin'ireo andian-taranaka.
Iray amin'ireo tononkalony ity, “Aubade with Burning City” (Aubade sy ny Tanàna Mandoro mahamay) :
Vietnam Atsimo, 29 Aprily 1975: Fampielezampeon'ny Tafika nandefa ny hiran'i Irving Berlin’ “White Christmas” ho toy ny marika hanombohana ny “Operation Frequent Wind – Rivotra Matetika”, famindràna toerana farany atao an'ireo sivily Amerikàna sy Vietnamiana tamin'ny alàlan'ny angidimby nandritry ny fahalavoan'i Saigon.
Felana Milkflower eny an'arabe toy ny rovitry ny akanjon-jazavavy iray.
Ho feno hafaliana sy hamirapiratra anie ny andronao…
Fenoiny ‘champagne’ ny kaopin-dite-ny, ampanantoniny ho eny imolony (razazavavy).
Sokafy, hoy izy (ralehilahy).
Etsy ivelany, miaramila iray mandrehoka
ny sigarany no dindony
mameno ny kianja toy ny vato nianjera avy any an-danitra.
Mba ho fotsy anie ny Noelinareo rehetra satria tsy hanaisotra eny am-balahany ny fitoeram-basiny ny mpiambina ny fifamoivoizana.
Ny tànany mitety ny somotraviavin'ny akanjo fotsy (-ndrazazavavy) .
Ireo masony mainty.
Ny volo fotsy (ndrazazavavy).
Fanala tokana monja.
Ny alok'izy roa: lahinjiro roa.
Fiaraben'ny tafika iray no mihazakazaka mamakivaky ny sampanan-dàlana,
feon'ankizy mihiakiaka avy ao anatiny ao.
Bisikilety iray natsipy avy eny am-baravarankelin'ny toeram-pivarotana.
Rehefa niakatra ny vovoka, alika mainty iray no eo amin'ny arabe, mihanahàna.
Takon'ny fiparasaky ny Noely fotsy ny tongony.
Eo ambony latabatra kely an-dohafandriana,
tapakà magnolia iray mihitatra toy ny tsiambaratelo iray
sambany vao norenesina voalohany.
Manjelanjelatra ny tendron'ny hazo ary ny ankizy mihaino, ny tavan'ny lehiben'ny polisy difotra ao anaty Coca-cola miraraka.
Sary iray mitovy habe amin'ny felan-tànana ahitàna ny rainy no vonto eo akaikin'ny sofiny havia.
Mitety ny tanàna toy ny mpitondratena iray ilay hira
Fotsy …Fotsy iray … manonofy lain'orampanàla aho
miraraka avy eny an-tsorony.
Mitefotefoka amin'ny varavarankely indray ny orampanàla. Orampanàla potipotika
miaraka aminà feombasy. Lanitra mena.
Orampanàla mandrakotra ireo fiara mifono vy mamakivaky ny rindrin'ny tanàna.
Angidimby iray nanainga ny efitra ho amin'ny toerana tsy takà-tànana.
Tena fotsy tanteraka ny tanàna, vonona handray ranomainty.
Mihazakazaha mihazakazaha mihazakazaha hoy ny fampielezampeo.
Felana Milkflower mandrakora alika mainty iray toy ny
rovitry ny akanjon-jazavavy iray.
Ho feno hafaliana sy hamirapiratra anie ny andronao. Miteny zavatra izy
fa tsy misy mandre izay lazainy amin'ireo.
Miparitaka eo ambanin'izy ireo ny vato avy amin'ny hotely.
Ny fandriana lasa kianjan'orampanàla mivakivaky.
Aza manahy, hoy izy, raha iny nanazava ny tavan'izy ireo iny indrindra ny baomba voalohany,
nandresy tamin'ny ady ireo rahalahiko
Tsy hisy intsony hitselatselatra.
Manonofy aho, manonofy …
handre ny lakolosin'ny kalesy eny ambony ranomandry…
Etsy amin'ny kianja etsy ambany: masera iray, mirehitra afo,
mitodika mangina amin'ny andriamaniny —
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/04/17/81533/
 nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org: http://www.pri.org/stories/2016-04-13/saigon-queens-vietnamese-american-poets-journey
 “Aubade with Burning City” (Aubade sy ny Tanàna Mandoro mahamay): http://www.poetryfoundation.org/poetrymagazine/poem/247166